एमालेको समानुपातिक सुचिमा पत्नीदेखि दिदि बहिनीको बाक्लो उपस्थिति, बदनाम मधेशी दल ! – Sanghiya Online
एमालेको समानुपातिक सुचिमा पत्नीदेखि दिदि बहिनीको बाक्लो उपस्थिति, बदनाम मधेशी दल !
Posted on : February 11, 2018 February 11, 2018 - No Comment
२८ माघ,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ४१ सांसद छान्दा एमालेले मधेशी दल हरुलाई लाग्ने सबै आरोप को रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । खास गरेर सम्धी, सम्धिनी र पत्नीलाई सभासद बनाएको आरोप जनता र खस्बादी पत्रकार तथा मिडियाले मधेशी दल वा खास गरेर राजपा लाइ लगाउने गरेका छन् ।
तर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ४१ सांसद छान्दा एमालेले पति पत्नी दाजु भाइको लाइन लगाएका छन् ।
उद्योगी मोती दुगडदेखि नेता पत्नीहरु पनि त्यही समानुपातिकबाट सांसद बनेका छन् । कृष्णगोपाल र विनासँगै रघुवीर महासेठ र जुली कुमारी महतो पति पत्नी दुवैजना प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने भाग्यमानी दम्पत्ति परेका छन् । महासेठ धनुषा ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने जुली समानुपातिकबाट सांसद बनेकी छन् ।
उपाध्यक्ष बामदेव गौतमकी पत्न तुलसा थापा, प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका शंकर पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्य र पार्टी कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी पत्नी विना श्रेष्ठ समानुपातिकबाट सांसद भएका छन् । संयोगनै मान्नुपर्छ बिजय सुब्बा र शिबमाया सहोदर दाजु बहिनी एकैपटक समानुपातिकबाट सांसद बनेका छन् ।
फोटो अन्लाइन खबरबाट
समानुपातिक तर्फको मतगणना सकियो, अन्तमा कसले कति मत पाए ? यस्तो छ डाटा
ओलीको कामकाज वयल गाडाको गतिमा भैरहेको हुनाले फोरम सरकारबाट बाहिरिदै- अशोक राइ
उपेन्द्रको खुलाशा: यी मुलुकहरुबाट कम्युनिस्ट आफै ध्वस्त भएका थिए, अब नेपालको पालो !
प्रचण्डको अर्को फड्को यस्तो छ ! नया योजनाका साथ् प्रचण्ड नया सोच लिएर अगाडि बढ्दै
एमालेबाट बनेका यी हुन समानुपातिकतर्फका ४१ सांसद (सूचीसहित)